IZIZI IHE NBAGHARI ASUS RT-N10P BEELINE - NETWORK NA INTANETI - 2019
Izizi ihe nbaghari Asus RT-N10P Beeline
Site na ịmepụta otu n'ime nsụgharị Wi-Fi nke ọhụrụ na ntanetị ọhụrụ, ọ dịwanye mkpa ịza ajụjụ maka otu esi ahazi Asus RT-N10P, ọ bụ ezie na ọ ga-adị ka enwereghị iche iche na ntọala ndị dị na nsụgharị ndị ọzọ, n'agbanyeghị ọhụrụ web interface, mba.
Ma eleghị anya ọ bụ naanị na ọ dị m ka ihe niile dị mfe, ya mere, m ga-ede ntụziaka zuru ezu banyere otu e si melite Asus RT-N10P maka onye na-eweta Ịntanetị Beeline. Hụkwa: Ịhazi onye routerị - ntụziaka niile na idozi nsogbu.
Njikọ ihe na-eme nchọgharị
Na mbu, ị ga - ejikọta na onye na-ahụ maka ihe ntanetị, echere m na ọ gaghị enwe nsogbu ebe a, mana, m ga-adọrọ uche gị gaa na nke a.
Jikọọ Beeline USB gaa n'ọdụ ụgbọelu Ịntanetị na router (acha anụnụ anụnụ, iche iche nke ọzọ 4).
Jikọọ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ na netwọk netwọk n'ọdụ ụgbọ mmiri netwọk nke kọmputa gị site na nke a ga-eme nhazi ahụ. Ị nwere ike ịhazi Asus RT-N10P na-enweghị njikọ wired, ma ọ ka mma ime usoro mbụ niile site na waya, ya mere ọ ga-adị mfe.
M na-atụ aro ka ị gaa na Njirimara nke Ethernet njikọ na kọmputa ma hụ ma ọ bụrụ na IPv4 Njirimara na-setịpụrụ na-akpaghị aka na-enweta adreesị IP na adreesị DNS. Ọ bụrụ na ọ bụghị, gbanwee parameters ahụ.
Rịba ama: tupu ịmalite usoro ọzọ iji hazie onye rawụta, kwụpụ njikọ Beeline L2TP na kọmputa gị ma gharakwa ijikọ ya (ọbụlagodi mgbe ntọala ahụ gasịchara), ma ị ga - ajụ ajụjụ banyere ihe mere Intanet ji arụ ọrụ na kọmpụta ahụ, ebe saịtị na laptọọpụ adịghị emeghe.
Ịtọ ntọala Beeline L2TP na ntanetị weebụ ọhụrụ nke Asus RT-N10P rawụta
Mgbe usoro niile a kọwara n'elu, mepee ihe nchọgharị Ịntanetị ma banye na 192.168.1.1 na ebe nkwụsị, na nbanye na paswọọdụ ịchọrọ ị kwesịrị ịbanye nbanye na paswọọdụ nke Asus RT-N10P - admin na admin, n'otu n'otu. A na-egosiputa adreesị na paswọọdụ a na nkwụnye na ala nke ngwaọrụ ahụ.
Mgbe nbanye mbụ, a ga-ewega gị na ntanetị ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịnwaleworị ihe ịga nke ọma iji setịpụ onye router, mgbe ahụ, ntọala ntọala ọkachamara ahụ agaghị emeghe (nke gosipụtara map netwọk). Akpa, m ga-akọwa otú ị ga-esi ahazi Asus RT-N10P maka Beeline na akpa ikpe, ma na nke abụọ.
Iji Nsigharite Ntọala Ịntanetị Ntanetị na Asus Router
Pịa bọtịnụ "Gaa" n'okpuru nkọwa nke ihe ntanetị gị.
Na peeji na-esonụ, a ga-agwa gị ka ịtọọ paswọọdụ ọhụrụ iji tinye ntọala Asus RT-N10P - debe paswọọdụ gị ma cheta ya maka ọdịnihu. Buru n'uche na nke a abụghị otu paswọọdụ ahụ ịchọrọ ijikọ na Wi-Fi. Pịa Ọzọ.
Usoro nke ịchọta ụdị njikọ ga-amalite na, ma eleghị anya, maka Beeline ọ ga-akọwa dị ka "Dynamic IP", nke ahụ abụghị ikpe. Ya mere, pịa bọtịnụ "Ịntanetị" ma họrọ ụdị njikọ "L2TP", chekwaa nhọrọ gị wee pịa "Ọzọ."
Na Akaụntụ Ntọala Akaụntụ, tinye Beeline nbanye (malite na 089) na Ngalaba Aha njirimara, na paswọọdụ Ịntanetị kwekọrọ na ngalaba okwuntughe. Mgbe ịpịpị bọtịnụ "Ọzọ", nkọwa nke ụdị njikọ ahụ ga-amalite ọzọ (echefula, Beeline L2TP na kọmputa ga - enwe nkwarụ) na, ọ bụrụ na ị banyere ihe niile n'ụzọ ziri ezi, peeji nke ọzọ ị ga - ahụ bụ "Ntọala netwọk ikuku".
Tinye aha netwọk (SSID) - nke a bụ aha nke ị ga-amata ọdịiche netwọk gị site na ndị ọzọ niile dị, jiri mkpụrụedemede Latịn ka ị pịnye. Na "Igodo netwọk" tinye paswọọdụ maka Wi-Fi, nke ga-agụnye ọbụlagodi 8 ederede. Ọzọkwa, dị ka ọ dị na mbụ, anaghị eji Cyrillic. Pịa bọtịnụ "Tinye".
Mgbe ịga nke ọma na-etinye ntọala ahụ n'ọrụ, ọkwa nke netwọk ikuku, njikọ Ịntanetị na netwọk mpaghara dị egosipụta. Ọ bụrụ na enweghị mmehie, ihe niile ga-arụ ọrụ ma Intanet dịlarịrị na kọmputa, ma mgbe ị jikọọ laptọọpụ gị maọbụ smartphone site na Wi-Fi, Intanet ga-adị na ha. Pịa "Na-esote" ma ị ga-ahụ onwe gị na Asus RT-N10P isi ntọala. N'ọdịnihu, ị ga-abanye na ngalaba a, na-agafe ọkachamara (ọ bụrụ na ịnweghị ịtọgharịa redire na ntọala ụlọ ọrụ).
Ntọala njikọ Beeline na aka
Ọ bụrụ na kama nke ọkachamara ntọlite ​​Ịntanetị dị na ntanetị nke Network Network, weeziezie Beeline, pịa na Internet na ekpe, na Ngalaba ntọala di elu ma kọwaa ntọala njikọ ndị na-esonụ:
Ụdị njikọ WAN - L2TP
Nweta adreesị IP na-akpaghị aka ma jikọọ na DNS na-akpaghị aka - Ee
Aha njirimara na paswọọdụ - nbanye na paswọọdụ maka Internet Beeline
VPN server - tp.internet.beeline.ru
Ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ anaghị achọ ka ịgbanwee. Pịa "Mee."
Ị nwere ike ịhazi aha SSID wireless na WiFi site na Asus RT-N10P isi, n'aka nri, n'okpuru isiokwu "Ọnọdụ System". Jiri ụkpụrụ ndị a:
Aha nke netwọk ikuku bụ aha gị bara uru (Latin na nọmba)
Igodo WPA-PSK bụ paswọọdụ Wi-Fi chọrọ (na-enweghị Cyrillic).
Pịa bọtịnụ "Tinye".
N'oge a, nkwekọrịta nhazi nke Asus RT-N10P router ga-agwụ, ị nwere ike ịnweta Ịntanetị site na Wi-Fi ma ọ bụ njikọ njikọ.